Studio 7 Headlines, Thursday, June 9, 2016
Police in Zimbabwe have arrested six people protesting against the country’s deteriorating economic situation at Africa Unity Square and beaten up several others in Harare intending to camp at the place for 16 days and 16 nights.
Education Minister Lazarus Dokora says it is mandatory under Zimbabwe’s national education policy for all schools to recite the national pledge.
Communities in Zimbabwe’s Mukumbura communal lands, Mashonaland Central Province, are now accessing grazing land, fields and a local river full of fish following the demining of the area by a non-governmental organization – Halo Trust.
Zimbabwean students in Algeria have dismissed as a pack of lies claims by the Ministry of Education that they have been paid annual allowances of $3,000 each. They were last paid in January last year.
And this evening we will be talking with Mandela Washington fellow, Tandiwe Ngwenya, a Zimbabwean civilian peacekeeper in war-torn South Sudan.
This evening on Livetalk our hosts of the Women’s Round Table Sithandekile Mhlanga and Marvellous Mhlanga Nyahuye will be talking with listeners about the cash crisis in Zimbabwe as long winding queues have become the order of the day.